World ọkwọrọikọ Reinhard Bonnke ọnwụ | Apg29
World ọkwọrọikọ Reinhard Bonnke ọnwụ
Ọtụtụ nde mmadụ gara ya nzukọ na ndị mmadụ mgbe nile azọpụta.
Ọtụtụ ndị na-echekwa mgbe ya ozizi na mgbe o kpere ekpere maka ndị ọrịa. Mgbe ahụ, ọ na-abịa azụ ka nwaanyị na oche nkwagharị, tiye aka-ya ejighị ya kpọrọ ya n'egedege ihu na-ejegharị ejegharị ya mgbe ahụ, o wee na-eje ije.
Reinhard Bonnke bụ a Christian ụwa okwuchukwu na-ekwusa. Ọ malitere ya n'izisa ozi ọma na-arụ ọrụ na 1970 na nwere nzukọ na nnukwu tent. Mgbe e mesịrị, mgbe nzukọ ahụ wee too ọ kwagara si na nnukwu ubi. Na Nigeria gara ọtụtụ nde ya nzukọ.
Reinhard Bonnke dị afọ 79. The foto dị n'elu bụ site na 2014 na-e si Wikipedia.
Ndị mmadụ nọ na mgbe zọpụta
M nụrụ Reinhard Bonnke ekwusa a ugboro ole na ole na mgbe nwetara ndị a zoputara. Ọ na-kweere na ihe dị ka 75 nde natara Jesus Christ ma na-azọpụta site na ya n'izisa ozi ọma ọrụ!
O kwusara ozi ke akwa revival mkpọsa n'ụwa, na-arụ ọrụ maka afọ 60 dị ka onye okwuchukwu. Ọtụtụ ugboro nakwa gara Niile Sweden. Ọzọkwa ebe a na-ndị a zoputara site n'ozi ya.
Ọtụtụ afọ gara aga mgbe m gara Bible School Pentecost na Jönköping Pentikọstal ụka anyị wee na-a na klas njem Eastern Europe, ma a akawahade anyị ụgbọ njem na obodo Hannover na dịkọrọ ndụ West Germany ma gee ntị Reinhard Bonnke na a mkpọsa rally.
Woman na oche nkwagharị
Ọtụtụ ndị na-echekwa mgbe ya ozizi na mgbe o kpere ekpere maka ndị ọrịa. Mgbe ahụ, m hụrụ otu nwanyị na-anọdụ a ngwọrọ. Ọ na-etinye aka ya na ndị ruteworo, otú ọbụna nwaanyị na oche nkwagharị, na mgbe ọ na-aga. M anya nke ọma iji hụ ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla mere. Ma ọ dịghị ihe mere.
Mgbe ahụ, ọ na-abịa azụ ka nwaanyị na oche nkwagharị, tiye aka-ya ejighị ya kpọrọ ya n'egedege ihu na-ejegharị ejegharị ya mgbe ahụ, o wee na-eje ije. Anyị bụ ndị na njem na-n'ụzọ doro anya idem ama akpa na-enweghị ike ikwere na anya anyị. Amaghị m ihe na-eme na ya, ma m maara na ọ biliri.
Merie ọtụtụ nde maka Jesus Christ
The Swedish Pentikọstal ndú Daniel ALM ede na twitter :
"Reinhard Bonnke merie ọtụtụ nde maka Christ. M ekele ya nke ukwuu. Ọ bụ a oge gboo ụkọchukwu Pentikọstal. M na-echeta mgbe m gere ya ntị na Berlin, Sweden na dị ka mbubreyo dị ka 2018 na Helsinki. Ezumike n'udo, Mr." ich biini ọkwọrọikọ! " .
Taa, ọkwọrọikọ Reinhard Bonnke home of Jesus mgbe n'ịrụ ya okwuchukwu n'omume ọma!